Su'aalaha La Weydiiyo - Beijing Jinglong Teknolojiyada Gaaska Gaarka ah ee Co., Ltd.
Waa maxay sheygaaga ugu muhiimsan?
Waxaan inta badan soo saarnaa daahirnimo sare, cufnaan sare iyo alaab xoog sare leh oo leh taxanaha iskudhafka, caaryada, korantada, usha, saxanka / xaashida, baloogga, kubbada, tuubada, xaashida / waraaqaha, jilicsanaanta iyo adkeysiga adag. Waxaan soo saari karnaa qaab iyo cabbirka loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida gaarka ah ee macaamiisha. Agabyada waxaa ka mid ah garaafyada korka ka sameysan / qaabaysan / isostatic ee dhammaan fasalada.
Waxaan nahay soo saare oo waxaan leenahay xuquuq madaxbanaan oo ah dhoofinta iyo soo dejinta.Waxaad ogaan doontaa inaan heysano qiimo tartan ah iyo kanaal isgaarsiineed oo deg deg ah qaabeynta iyo soosaarka.
Ma bixin kartaa shaybaarro bilaash ah?
Caadi ahaan waxaan soo bandhigi karnaa shaybaarro loogu talagalay alaabada yaryar, haddii muunadku qaali yahay, macaamiisha ayaa bixin doona qiimaha aasaasiga ah ee muunadda. Ma bixineyno xamuulka xamuulka.
Miyaad aqbashaa amarrada OEM ama ODM?
Sure, waan sameynaa.
Ka waran waqtiga wax soo saarkaaga?
Badanaa waqtiga wax soo saarkeenu waa 7-10 maalmood.
Ma jiro wax xadidan oo loogu talagalay MOQ, 1 gabal ayaa sidoo kale la heli karaa.
Xirmada sidee u egtahay?
Xirxirida sanduuqa alwaaxda aan fumbiyuutarka ahayn, guddiga xumbada iyo dhogorta luul oo buuxinaya meel u dhexeysa, waxaanna alaab u dhignaa sida macaamilku codsaday.
Badanaa, waxaan aqbalnaa T / T, Paypal, Western Union.
Ka waran gaadiidka?
Bt express sida DHL, FEDEX, UPS, TNT, iwm;
Ama u keen alaabta wakiilkaaga Shiinaha.
Waxaan marwalba doorannaa habka kuugu habboon adiga Fadlan nala soo xiriir khidmadda xamuulka.
Ma leedahay adeeg iib ah kadib?
Haa. Shaqaalaheena iibka kadib markasta wey ku garab istaagi doonaan, hadii aad wax su'aal ah ka qabtid badeecada, fadlan emayl noo soo dir, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan ku xallin karno dhibaatadaada.